Rapture of Doctrine - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘုရားသခင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > Rapture အယူဝါဒ
ခရစ်ယာန်အချို့ထောက်ခံအားပေးသည့်“ ပီတိအယူဝါဒ” သည်သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာသောအခါချာ့ချ်တွင်အများအားဖြင့်ခေါ်လေ့ရှိသည့်အတိုင်းဒုတိယဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်။ အယူဝါဒကယုံကြည်သူများသည်တက်ကြွစွာတက်ကြွမှုနည်းနည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သူသည်ဘုန်းအသရေပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါတစ်ချိန်ချိန်တွင်ခရစ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတို့ကို“ ဆွဲဆောင်” ခံရလိမ့်မည်။ Rapture ယုံကြည်သူများသည်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုအထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15-၂၂:
သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအခါ၊ အသက်ရှင်။ ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏အရင်အ ဦး နေရာကျရကြမည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏တံပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှကိုင်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ။ ၊ ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အ ဦး ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုနောက်အသက်ရှင်။ ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းငှါ၊ သို့ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းငှါ၎င်း၊
ပီတိအယူဝါဒသည် ၁၈၃၀ ဝန်းကျင်တွင် John Nelson Darby အမည်ရှိအမျိုးသားတစ် ဦး ထံပြန်သွားပုံရသည်။ သူကဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ ပထမ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခမတိုင်မီခရစ်တော်သည်သူ၏သန့်ရှင်းသူများ (“ ပီတိ”) သို့လာလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးနောက်သူတို့နှင့်အတူကြွလာလိမ့်မည်၊ ထို့နောက် Darby သည်ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအစစ်အမှန်နှင့်ဘုန်းအသရေကိုသာမြင်ခဲ့သည်။ ချီဆောင်ခြင်း၌ယုံကြည်သူများသည်ဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ၊ ကာလအတွင်း (သို့) ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ၊ (သို့) ကာလမတိုင်မီ၊ (သို့) ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီ (သို့) ကာလအတွင်း ထို့အပြင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်အတွင်း၌ရွေးချယ်ထားသောအထက်တန်းလွှာများသာလျှင်ဒုက္ခ၏အစတွင်ချီဆောင်ခံရလိမ့်မည်ဟုအမည်ခံလူနည်းစုအယူအဆတစ်ခုရှိသည်။
ပီတိနဲ့ပတ်သက်ပြီး Grace Communion International (GCI / WKG) ကဘယ်လိုခံစားရလဲ။
Wenn wir 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15-17 betrachten, scheint der Apostel Paulus nur zu sagen, dass beim Ertönen der «Posaune Gottes» die Toten, die in Christus gestorben sind, zuerst auferstehen und mit den noch lebenden Gläubigen gemeinsam auffahren werden «auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen». Dass die ganze Kirche – oder ein Teil der Kirche – vor, während oder nach der Bedrängnis entrückt oder an einen anderen Ort versetzt werden soll, davon ist nicht die Rede.
မဿဲ ၂4,29-31 scheint von einem ähnlichen Ereignis zu sprechen. Bei Matthäus sagt Jesus, die Heiligen würden gesammelt «sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit». Die Auferstehung, Sammlung oder, wenn man so will, «Entrückung» findet summarisch bei Jesu zweitem Kommen statt. Aus diesen Schriftstellen sind die Unterscheidungen, welche die Vertreter der Entrückungslehre treffen, schwer nachzuvollziehen. Aus diesem Grund vertritt die Kirche eine sachliche Auslegung der oben erwähnten Schriftstelle und sieht eine spezielle Entrückung nicht gegeben. Die fraglichen Verse besagen einfach, dass die toten Heiligen auferstehen und sich vereinigen werden mit jenen, die noch leben, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkehrt.
သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခြင်းမတိုင်မှီ၊ ၀ င်ရောက်ချိန်နှင့်အပြီး၌အသင်းတော်သည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမေးခွန်းကကျမ်းစာ၌အဓိကဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၊ တစ်ယူသန်ဆန်ဆန်ပြောသောအရာများသည်သခင်ယေရှုသည်ကမ္ဘာကြီးကိုတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်ဘုန်းတော်ဖြင့်ပြန်လည်ကြွလာတော်မူမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာသိထားကြသည်။ အကြင်သူသည်မိမိကိုသစ္စာစောင့်လျက်နေ၏။ ထိုသူသည်ထမြောက်။ အစဉ်အမြဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။